नेपाल समाचार Archives - VOICE OF NEPAL TV
अछाम । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत अछामको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा खसेको मत भन्दा १८ मत बढी भेटिएको छ । ७ सय ६४ मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा ७ सय ४७ मत खसेकोमा ७ सय ६५ मत पत्र भेटिएको हो । अब के गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल भइरहेको निर्वाचन अधिकृत गणेश प्रसाद ढुंगानाले बताउनुभयो...
कैलाली । विद्युतीय धरापको पासोमा परेर जिल्लामा एक जनाको मृत्यु भएको छ । गौरीगङ्गा नगरपालिका–७ को सुनपाल सामुदायिक वनमा सिकारका लागि विच्छाएको विद्युतीय धरापको पासोमा परेर सोही वडाका करिब ५५ वर्षका देव बहादुर बोहराको मृत्यु भएको हो । बोहराको शव भए नजिकै एक थान भरुवा बन्दुकसमेत फेला परेको इलाका प्रहरी क...
सर्लाही । नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन गराउन खटिनुभएका निर्वाचन अधिकृतमाथि हातपात भएको छ । बिहीबार मध्यान्ह सदरमुकाम मलङ्गवास्थित पार्टी कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृत दीवाकर राज पाण्डेमाथि कांग्रेसकै एक समूहले हातपात गरेको हो । जिल्ला पार्टी कार्यालयमा मतदान अधिकृत खटाउने विषयमा छलफल भइरहेका बेला निर्वाचन अधिकृत प...
तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिका २ मा रहेको सत्यवती मा.वि.मा शनिबार संसदीय निर्वाचनको झल्को दिनेगरि अभिभावक मतदान गर्न आतुर थिए । हातमा रातो चिटसहित बोकेर भोट हाल्न युवादेखि वृद्धवृद्धा अभिभावकले विद्यालय व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी छान्न मतदान गरे । विद्यालयको प्रांगणमा सदाझैं कापी, कलम बोकेका विद्यार्थी नभ...
विराटनगर । प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा ५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । २५७ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ५१ जना र ९२ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३ जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर परीक्षणका आधारमा मोरङमा २६, झापामा १७, सुनसरीमा ७ र प्रदेश १ बाहिरका...
रबिन्द्र यादव / नवलपरासी पश्चिम नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ हरपुरमा रहेको छठघाट लगायतका स्थानहरुमा आइतबार बृहत सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । हिन्दूहरुको महान पर्व छठको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बिओपी गुठी परसौनीको आयोजना हरपुर स्थित झुलनिपुर छठघाट, झुलनिपुर बजार लगायतको स्थानहरुमा सरसफाई ...
काठमाडौं | आज यमपञ्चक अर्थात् तिहारको पाँचौं तथा अन्तिम दिन भाइटीका मनाइँदैछ। दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै टीका लगाइदिन्छन्। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको मुख्य दिन आज दाजु...
कैलाली । चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरीले एक किशोरलाई पक्राउ गरेको छ । टीकापुर नगरपालिका–८ का १८ वर्षीय अनुप साउदको हत्या आरोपमा भजनी नगरपालिका–३ का १९ वर्षीय किरन साउदलाई पक्राउ गरिएको इलाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । चक्कु प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका अनुपको टीकापुर अस्पतालम...
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शुक्रबार थप १७ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । चौविस घण्टामा प्रदेशभर पीसीआर र एन्टीजेन विधिबाट एक हजार ५५ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा १७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । सात जनामा पीसीआर र दश जनामा एन्टिजेन विधिमार्फत गरिएको परीक्षणमा सङ...
काठमाडौं । सरकारले फेरि पेट्रोलको मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले शुक्रबार रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोलसहित खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, मटितेल र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको हो । निगमले १ सय ३० मा बिक्री गर्दै आएको पेट्रोलको मूल्य १ सय ३३ पुर्याएको छ । डिजेल/मट्टतिलको मूल्य प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले नै बढे...